Mabasa 28 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mabasa Evaapostora 28:1-31
Kusvika pachitsuwa cheMarita (1-6)
Baba vaPabriyo vanoporeswa (7-10)
Kupfuurira kuRoma (11-16)
Pauro anotaura nevaJudha muRoma (17-29)
Pauro anoparidza neushingi kwemakore maviri (30, 31)
28 Patakasvika kumahombekombe zvakanaka, takazoziva kuti chitsuwa chacho chainzi Marita.+ 2 Vanhu veko* vakatibata zvakanaka chaizvo.* Vakabatidza moto vakatigamuchira tese zvakanaka nekuti kwainaya uye kwaitonhora. 3 Asi Pauro paakaunganidza tsotso ndokudziisa pamoto, makabva mabuda nyoka ine uturu payakanzwa kupisa, ikamuruma ndokuramba yakanamatira paruoko rwake. 4 Vanhu vaya pavakaona nyoka iyi ine uturu yakarembera paruoko rwake, vakatanga kutaurirana vachiti: “Murume uyu imhondi chaiyo, kunyange zvazvo atadza kufira mugungwa, Kutongwa Kwakarurama* kwaratidza kuti haana kukodzera kuti arambe ari mupenyu.” 5 Asi akazunzira nyoka yacho mumoto, uye hapana chakaitika kwaari. 6 Asi vaitarisira kuti achazvimba kana kuti achangoerekana awira pasi ofa. Vakamira kwenguva refu, uye hapana chakaitika kwaari, saka vakachinja pfungwa, vakatanga kuti aiva mwari. 7 Pedyo nenzvimbo iyoyo paiva nemutongi wechitsuwa ichi aiva neminda ainzi Pabriyo, uye akatitambira zvakanaka, akagara nesu kwemazuva matatu. 8 Zvakangoitikawo kuti baba vaPabriyo vakanga vakarara vachirwara nefivha nemanyoka, uye Pauro akapinda mavaiva, akanyengetera, akaisa maoko ake pavari, ndokuvaporesa.+ 9 Izvi pazvakaitika, vanhu vese vakanga vachirwara vaiva pachitsuwa ichi vakatangawo kuuya kwaari, vachiporeswa.+ 10 Vakatipawo zvipo zvakawanda zvekutitenda, uye patakanga tava kuenda nengarava, vakatirongedzera zvese zvataida. 11 Pashure pemwedzi mitatu takasimuka tiri mungarava yaiva nemufananidzo wakanzi “Vanakomana vaZeusi.” Ngarava yacho yaibva kuArekizandriya uye yakanga yapedza mwaka wechando iri pachitsuwa ichi. 12 Takasvika pachiteshi chepaSirakusi, tikagara ipapo kwemazuva matatu; 13 takabva ipapo tikafamba tikasvika kuRegiyumu. Mangwana acho mhepo yekumaodzanyemba yakasimuka, tikazosvika kuPuteori zuva rechipiri. 14 Pano takawana hama uye dzakatikumbira kuti timbogara nadzo kwemazuva manomwe, ndokubva tazoenda takananga kuRoma. 15 Hama dzaiva kuRoma, padzakanzwa nezvedu, dzakauya kuzotichingura tichiri kure chaizvo, kuMusika weApiyo neHotera Nhatu. Pauro paakadziona, akaonga Mwari, akanzwa asimbiswa.+ 16 Patakazosvika muRoma, Pauro akabvumirwa kugara ega aine murwi aimuchengetedza. 17 Asi pashure pemazuva matatu akadana varume vakuru vevaJudha. Pavakanga vaungana, akati kwavari: “Varume, hama, kunyange ndisina kuita chinhu chinopesana nevanhu kana chinopesana netsika dzemadzitateguru edu,+ ndakasungwa kuJerusarema ndikaiswa mumaoko evaRoma.+ 18 Uye pashure pekunge vandibvunzurudza,+ vaida kundisunungura, nekuti pakanga pasina chikonzero chekuti ndiurayiwe.+ 19 Asi vaJudha pavakaramba kuti ndisunungurwe, ndaitofanira kukwidza nyaya yacho kuna Kesari,+ asi kwete nekuti ndaiva nechimwe chinhu chekupomera rudzi rwangu. 20 Saka izvi ndizvo zvaita kuti ndikumbire kukuonai ndotaura nemi, nekuti ndakasungwa necheni idzi nekuda kwetariro yaIsraeri.”+ 21 Ivo vakati kwaari: “Hatina kumbotambira tsamba dziri kutaura nezvako kubva kuJudhiya, uye hapana kana mumwe wehama dzakabva ikoko akatiudza kana kutaura chinhu chakaipa nezvako. 22 Asi tinofunga kuti zvakanaka kuti tinzwe uchitaura wega zvaunofunga, nekuti chokwadi ndechekuti tinoziva kuti kapoka aka+ kanoshorwa kwese kwese.”+ 23 Vakabva varonga zuva rekuzoonana naye, uye vakauya vatowanda kumba kwaaigara. Uye kubvira mangwanani kusvikira manheru akavatsanangurira nyaya yacho achivapa uchapupu hwakasimba nezveUmambo hwaMwari, kuti avanyengetedze nezvaJesu+ kubva muMutemo waMozisi+ nezvakanyorwa neVaprofita.+ 24 Vamwe vakatanga kutenda zvaaitaura; vamwe vakanga vasingatendi. 25 Saka sezvo vakanga vasingabvumirani, vakatanga kuenda, uye Pauro akataura shoko iri rimwe chete, achiti: “Mweya mutsvene wakareva pawakataura kumadzitateguru enyu uchishandisa muprofita Isaya 26 uchiti, ‘Enda kuvanhu ava unoti: “Kunzwa muchanzwa, asi hamuzombonzwisisi, uye kutarisa muchatarisa, asi hamuzombooni.+ 27 Nekuti mwoyo yevanhu ava haichateereri, uye nzeve dzavo dzakanzwa asi havana zvavakaita, uye vakatsinzina maziso avo, kuti varege kuzomboona nemaziso avo uye kunzwa nenzeve dzavo vachinzwisisa nemwoyo yavo, votendeuka, ndovaporesa.”’+ 28 Saka zivai kuti ruponeso urwu rwakabva kuna Mwari rwakatumirwa kune mamwe marudzi;+ iwo achatoruteerera.”+ 29 * —— 30 Saka akagara ipapo kwemakore maviri akazara ari mumba yake ega yaibhadharwa,+ uye aigamuchira zvakanaka vese vaimushanyira, 31 achivaparidzira Umambo hwaMwari uye achivadzidzisa nezvaIshe Jesu Kristu, achitaura akasununguka,*+ pasina anomurambidza.
^ Kana kuti “Vanhu vacho vaitaura mumwe mutauro.”
^ Kana kuti “vakatiratidza mutsa wakakura.”
^ Shoko racho rechiGiriki nderekuti Di′ke. Zvichida vaitaura nezvamwarikadzi wekutsiva kana kuti vaingotaurawo pfungwa yekuti atsiviwa.
^ Kana kuti “neushingi.”